श्रीमती रिसालु छ भने सम्हल्नुस् यसरी!
काठमाडौँ २८ फागुन ।
श्रीमान-श्रीमतीले एक-अर्काको स्वभाव बुझ्न धेरै आवश्यक हुन्छ । वैवाहिक जीवनमा उतार चढाव र श्रीमतीको बिचारमा अन्तर हुनु स्वाभाविक हो । कहिलेकाहीँ एक साथी धेरै प्रभावी या डोमिनेटिङ्ग हुन सक्छ । यदि श्रीमानले आफ्नै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् भने श्रीमती चुप रहने प्रयास गरेर सामञ्जस्य बढाउने कोशिस गर्छिन् र यदि श्रीमती कुरा कुरामा बहस गर्छिन् भने घरमा शान्ति बनाइराख्ने भुमिका श्रीमानले निभाउनु पर्छ ।
कुन कुराले रिसाएको हो, जान्ने कोसिस गर्नुहोस्
श्रीमती हरेक कुरामा रिसाउदैनन् हाेला, बिनाकारण कोही पनि रिसाउदैन। त्यो कुरा र अवस्थालाई ध्यान दिनुहोस्, जुन कुराले श्रीमतीलाई रिस उठ्छ । यदि उनलाई बुझ्नुभयो भने यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनबाट बच्न सकिन्छ र श्रीमतीको रिसलाई सामना गर्नुपर्दैन ।
आफ्नो व्यवहारलाई चेक गर्दै गर्नुहोस्
हुनसक्छ, तपाईको कुनै यस्तो बानी छ, जुन उनलाई मनर्दैन । तपाईका लागि त्यस्तो व्यवहार या बानीलाई परिर्वतन गर्न असम्भव नै भए पनि श्रीमती सामुन्ने त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, जसले उनीभित्र झिँझलाहट पैदा होस् ।
उनको मानसिक अवस्थालाई हेरेर उसको कुरा सुन्नुहोस्
शान्त हुने समय दिनुहोस् । तपाईलाई आफ्ना श्रीमतीलाई रिस उठिरहेको छ जस्तो लाग्यो भने उसलाई चुप लगाउने या कुनै प्रतिक्रिया दिनुहोस् । बीचमा बोल्ने या नराम्रो भन्यो भने कुरा बढ्छ जान्छ । हुनसक्छ, तपाई उसको कुरा सुन्नुहुन्न, जे भन्न चाहान्छिन् तपाई भन्ने मौका दिनुहोस् । उनको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् । हुनसक्छ , तपाईले यसो गर्नुभयो भने रिसको साहारा लिन नपरोस् ।
उनलाई स्पेस दिनुहोस् ताक उनलाई आफ्नो गल्ति महशुस हुन्छ या तपाईसंग आएर सरी पनि भन्न सक्छिन् ।
मनोबैज्ञानिकका अनुसार जो मानिसलाई धेरै बढी उठ्छ जति चाँडो रिस उठ्छ त्यति नै चाडो रिस शान्त पनि हुन्छ । यदि कुनै कारण थपाईकी श्रीमतीको पारा तात्यो हुनत यस्तो गर्न गाहे हुन्छ तर कोशिस गर्नुहोस्, त्यो समयमा आफ्नो अनुहारमा खुशी ल्याइरहनुहोस् । फेरि हेर्नुहोस् कसरी तपाईकी श्रीमती शान्त हुन्छिन् । हुनसक्छ, उनले आफुलाई तपाईले गिज्याइरहेको महशुस गर्नसक्छिन् ।
आफ्नो रिसालु श्रीमतीका साथ निभाउन तपाईले धैर्य गर्नुपर्छ । तपाईलाई बहिलेकाहीँ यति सानो सानो कुरामा किन रिसाएको होला भन्ने पनि लाग्छ उसले किन यस्तो रिएक्ट गरेकी भन्ने पनिलाग्न सक्ला तर यस्तोमा उनलाई रोक्ने या उसंग रिसाउने गर्नुभयो भने उनको रिस झन बढ्छ । तपाई धैर्य नै गरिरहनुहोस् बरु हुन्छ भने उसको अगाडी नबस्नुहोस्, यसले कमसेकम तपाईको सहननशक्तिले त आफ्नो ठाँउ छोड्दैन् ।
गल्ती सबैबाट हुन्छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुहोस् भन्ने श्रीमती चाहन्छिन् भने यसमा नराम्रो नै के छ र ? यस प्रकार उनलाई पनि राम्रो लाग्छ र तपाईलाई पनि उनको क्रोधबाट चाँडै छुटकारा मिल्छ । हुनसक्छ, तपाईको कुनै यस्तो बानी छ, जुन उनलाई मनर्दैन तर आफ्नो गल्ती स्विकार्न सक्नु भयो भने समस्याबाट चाडै मुक्त हुन सक्नुहुनेछ
आफ्नो ईगोलाई एकातिर राख्नुहोस्
उनको कुरा सुन्नुहोस् । कहिले काहीँ आफ्नो कुरा सुनिदिने मान्छे नहुँदा पनि रिस उठ्न सक्छ । हुन सक्छ उनी सोही कुरामा रिसाइरहेकी हुनसक्छिन् । यस संसारमा धेरे मानिस यसैकारणले डिप्रेसनमा रहेका हुन्छन् कि उनको कुरा सुन्ने र बुझ्ने कोही छैन् । म आफु ठुलो हो उनको कुरा सुन्न आवश्यक छैन भन्ने इगो मनबाट हटाउनुहोस् र उनलाई मित्रको जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् ।
घरबाट बाहिर जानुहोस् ।
यदि उनी धेरै रिसाएकी छन् भने तपाई घरबाट नै बाहिर जानु राम्रो हुन्छ । जब तपाईँ फर्कनुहुन्छ, उनी शान्त भइसकेकी हुन्छिन् । यदि उनलाई कोही अरु संग रिस उठेको छ भने दुवैजना वाकमा जानुहोस्, यसले तपाईकी श्रीमती र तपाईँ दुबैजनालाई रिल्याक्स हुन सहयोग पुग्छ । धेरै जसो श्रीमती आफ्नो श्रीमानबाट सर्पोट चाहान्छन् । यदि तपाईँकी श्रीमती कुनै कुरामा गलत नै भए पनि रिसाएको समयमा उनलाई सही देखाउने या बहस गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् बरु सही सही समयको प्रतिक्षा गर्नुहोस् । यदि उनलाई उनको श्रीमान्ले सपोटृ गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ भने उनलाई राहातको महसुस हुन्छ । जसकारण उनको रिस नियन्त्रणमा सहयोग मिल्छ ।
मनोवेज्ञानिक अनुसार तपाईँ उसलाई उनको इमोसन्समा कन्ट्रोल गर्ने र सल्लाह दिनको बदला आफ्नो मुख बन्द गर्नुहोस् र हाँसिराख्नुहोस् ।